ကရင်ပြည်နယ် လမ်းပိုင်း လုံခြုံရေး ကောင်းမွန်လာသဖြင့် ထားဝယ်မြို့ ရှင်ကိုးရှင် ဘုရားများ၌ ? - Yangon Media Group
ကရင်ပြည်နယ် လမ်းပိုင်း လုံခြုံရေး ကောင်းမွန်လာသဖြင့် ထားဝယ်မြို့ ရှင်ကိုးရှင် ဘုရားများ၌ ?
ထားဝယ်၊ ဇန်နဝါရီ ၈
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် အဓိကလမ်းမကြီးများ တိုးတက်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်း၊ လမ်းပိုင်းလုံခြုံရေးအထူးကောင်းမွန်လာခြင်းများကြောင့် ယခုနှစ်ပွင့် လင်းရာသီချိန်တွင် ထားဝယ်မြို့ ရှင်ကိုးရှင်ဘုရားများတွင် ရပ်ဝေးမှလာ ရောက်သည့် ဘုရားဖူးခရီးသည်များဖြင့် ပိုမိုစည်ကားနေကြောင်း သိရသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြို့ တော်ထားဝယ်မြို့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ လာရောက်ရာတွင် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့မှတစ်ဆင့် လာရောက်သူများပြားပြီး ပွင့်လင်းရာသီချိန်တွင် ပြည်တွင်းဘုရားဖူးအပန်းဖြေခရီး သွားသူများပြားလာရာ ယခင်က ရပ်ဝေးမှလာရောက်မှုနည်းပါးသည့် ထားဝယ်မြို့တွင် ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှ စတင်၍ဘုရားဖူးခရီးသည် လာရောက်မှုများပြားလာကာ မိုး လေကင်းရှင်းသည့် နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ ရပ်ဝေးဘုရားဖူးခရီးသည် ပိုမိုများပြားလာသည်။
”ထားဝယ်ကို အရင်တုန်းက မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်ဘက်ကပဲ လာသူများပါတယ်။ ထားဝယ်အထင်က ရမောင်းမကန်ကမ်းခြေအပန်းဖြေ ခရီးလာကြသူတွေက မြို့ပေါ်ရောက်ခိုက် ဘုရားတွေ ဝင်ဖူးတာလောက် ပဲရှိတာပါ။ မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ၊ သံဖြူ ဇရပ်၊ စက်စဲကမ်းခြေနဲ့ ကျိုက္ခမီရေလယ်ဘုရားလောက်ပဲ အရောက်များကြပြီး ထားဝယ်အထိဆင်းသူ နည်းပါတယ်။ နာမည်ကြီးမလွှဲ တောင်လမ်းပိုင်းမှာ ဓားပြတိုက်၊ အပစ်အခတ်ခံကြရတာရှိတော့ ပွင့်လင်းရာသီမှာတောင် ထားဝယ်အရောက်လာသူနည်းတယ်။ မြို့ ပေါ်ရှင်ကိုးရှင် သမိုင်းဝင်ဘုရား တွေမှာ နေ့စဉ်ဘုရားဖူးလာရောက်သူတွေများပါတယ်”ဟု ထားဝယ် မြို့ရှင်ကိုးရှင်သမိုင်းဝင် ရှင်တောက်ထိန်ဘုရားကြီး အလှည့်ကျဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုအခါမော်လမြိုင်မှ ထားဝယ်အထိ လမ်းပိုင်းမှာမြေပြန့်ရော တောင်ပေါ်လမ်းများပါ ကျယ်ဝန်းလာခြင်း၊ ကတ္တရာလမ်းကျယ်ဖြစ် လာသည့်အဖြစ်တချို့လမ်းပိုင်းများတွင် နိုင်လွန်ကတ္တရာလမ်းဖြစ်လာခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းတစ် လျှောက်သောင်းကျန်းသူနှင့် ဓားပြ များလုံးဝကင်းရှင်းသွားပြီဖြစ်၍ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် စသောမြို့များအထိ ခရီးသည်တင်အဝေးပြေးယာဉ်များဖြင့် ပုံမှန်ပြေး ဆွဲနေကြပြီဖြစ်ကာ ယခုအခါထား ဝယ်မြို့သာမက မြိတ်၊ တနင်္သာရီ၊ ကော့သောင်းမြို့များအထိ ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများရှိလာသလို ကိုယ်ပိုင်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ယာဉ်ကြီးများ မှန်လုံလေအိတ်ဘုရားဖူးယာဉ်များပါ သွားလာမှုရှိလာရာ ထားဝယ်မြို့ မှာ လမ်းဆုံမြို့ဖြစ်သဖြင့် ပိုမိုစည်ကားလာကြောင်း သိရသည်။
ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒမှ စစ်ကိုင်းသက်ကြီး ဆရာ၊ ဆရာမကြီး ၄၇၅ ဦးကို ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးဆပ်ပွဲ ကျ
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးခရိုင်အတွင်း မီးလောင်မှုကြောင့် ကျပ်သိန်း ၁၉ဝဝ နီးပါး ဆုံးရှုံးခဲ့
ကိုလံဘီယာ အစိုးရနှင့် ELN သူပုန်တို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ကာလတွင??
မြဝတီ ပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်း ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် နေရပ်ပြန် အလုပ်သမား ၃ဝဝဝ ခန့် သောင်ရင်းမြ??
သီရိလင်္ကာ အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသူဆိုသည့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး မြန်မာ?